Magacyada 5 ka mid ah saaxiibadii ugu fiicnaa ee Cristiano Ronaldo ee Real Madrid Horyaalka Spain
Manchester City oo xiiseyneysa saxiixa Robin Gosens
Manchester United oo isha ku heysa midkood Lautaro Martinez, ama Milan Skriniar
Fabrizio Romano: ‘Arsenal Waxa Ay Xiiseyneysaa Tariq Lamptey’
Qaar kamid ah garoomada kooxaha ingiriiska oo lagu ciyaari doono Tartanka Euro 2020 oo shaaca laga qaaday.
Macalinkii hore ee kooxda barcelona Pep guardiola oo ka hadlay waqtiga xun ee kooxdiisii hore ku jirto.
Home Horyaalka Spain Magacyada 5 ka mid ah saaxiibadii ugu fiicnaa ee Cristiano Ronaldo ee...
Magacyada 5 ka mid ah saaxiibadii ugu fiicnaa ee Cristiano Ronaldo ee Real Madrid
Ronaldo waa mid kamid ah xidigaha ugu feecan aduunka waxana uu heerkaas kasoo bilaabay Manchester United – uu kula guuleestay 3 Premier League , 1 FA Cup, 2 League Cups, 1 Champions League , iyo 5 Ballon d’Or – wuxuu u wareegay kooxda Isbaanishka Real Madrid lacag rikoorka adduunka ah oo ah million 80 million.
Cristiano Ronaldo wuxuu ku guuleystay 2 horyaal oo La Liga ah, afar Champions League ah, 2 Spanish Super Cups iyo seddex FIFA Club World Cups. Wuxuu sidoo kale urursaday abaalmarino shaqsiyadeed iyo diiwaanno shaqsiyeed, kuwaas oo aad u tiro badan oo aan lasoo koobi karin. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo xirfadaha Ronaldo uu yahay mid ka mid ah guuleystayaasha ugu kalsoon ee abid kubbadda cagta.
Qeyb ka mid ah sababihii uu Cristiano Ronaldo ugu soo barbaaray Los Blancos waxaa ugu wacan isaga oo ay taageerayaan asxaab aad u fiican oo saaxiib dhow u ahaa.
bal aan eegno Shanta Saaxiib ee CR7:
3 Gareth Bale
2 Mesut Özil
1 Karim Benzema
Previous articleAC Milan oo bartilmaameedsaneysa Emerson-ka Barcelona si uu ugu badalaan Diogo Dalot
Next articleManchester United oo talaabo u qaaday Mustaqbalka Edinson Cavani ee kooxda
Manchester United oo isha ku heysa midkood Lautaro Martinez, ama Milan...
Wararka Ciyaaraha Maanta1893
Suuqa kala iibsiga736
ciyaaro.com 2009- 2020